Dil Ka Dhacay Degmada Ceel-Afweyn Iyo Xaalada Rasmiga Ah Ee Ka Jirta Degmadaasi.
Burco(Gebogebonews)-Beelihii la dhex dhigay nabada deegaanka Ceel Afweyn ayaa mar kale isku gaystay dil iyo dhaawac.
Dilka dhacay oo ay gaysteen beesha Biciide ayaa yimid wakhti ay xidhan tahay nabadii la dhex dhigay dadka walaalaha ah ee ku wada nool deegaanka Ceel Afweyn isla markaana ay bulshada somaliland si weyn ugu garab istaagtay qaabkii ay u qaateen nabadayntii ay ergadu dhex dhigtay.
Wararka Ayaa Sheegaya fal celin ka dhalatay dilka loo gaystay nin ka soo jeeda Beesha Scad Yoonis uu sababay dhaawaca hal ilaa laba qof ka dib markii dad ay isku deegaan yihiin marxuunka la dilay ay jid gooyo u galeen dad kale oo ay hayb wadaagaan dadkii dilka gaystay.
Dhinaca kale wararka rasmiga ah ee laga helayo deegaanka dilka iyo dhaawacu ka dhacay ee Ceel Afweyn ayaa sheegaya in guud ahaanba xaaladu degan tahay isla markaana aanay ilaa hada jirin wax dhibaato ah oo ka taagan, iyada oo dadkuna ay masuuliyad iska saareen sidii ay nabad galyada u ilaalin lahaayeen isla markaana dadkaa fidnada gaystay aanay saamayn ugu yeelan lahayn dadka wada dhashay ee Ceel Afweyn.
Xaalada deegaanka Ceel Afweyn ayaa la rajaynayaa inaanu wax isbadal ahi ku iman isla markaana wax garadka labada dhinac ay xil iska saari doonaan inaanu falkaasi sii kordhin, iyada oo xukuumada somaliland-na Aanay Weli Ka Hadal xaalada soo korodhay ee u baahan Wax Ka Qabashada.